Maitiro Ekutengesa Vatengesi Kuti Vakwidziridze Nhare dzeKisimusi dzeKisimusi Kuwedzera Revenue | Martech Zone
Maitiro Ekutengesa Vatengesi Kuti Vakwidziridze Nhare dzeKisimusi dzeKisimusi Kuwedzera Revenue
Muvhuro, Zvita 1, 2014 Douglas Karr
Mwaka uno weKisimusi, vatengesi nemabhizinesi vanogona kusimudzira mari munzira hombe: kuburikidza nekushambadzira nhare. Panguva ino chaiyo, kune 1.75 bhiriyoni varidzi ve smartphone pasi rese uye 173 mamirioni muUS, achiverengera kuburitsa 72% yemusika werunhare musika kuNorth America.
Kutenga pamhepo pamafoni mbozha nguva pfupi yadarika kwakatora desktop kekutanga uye 52% yekushanyirwa kwewebhusaiti ikozvino yaitwa kuburikidza nenhare mbozha. Asi, mutengi anogara nguva pane zvekushambadzira zvakadai seemail anogona kunge mashoma semasekondi matatu. Kunzwisisa ruzivo rwevashandisi mbozha kwakakosha kwazvo kune vatengesi kuti vawedzere kushambadzira uye kusimudzira kutengesa mukati memwaka wezororo.
Nekuisa nharembozha pakati peiyo omni-chiteshi zano, vatengesi nemavhiya zvichagonesa nhanho nyowani yekudyidzana, kuita, hurukuro, uye kuvimbika. Uye mari. FitForCommerce
SmartFocus iri kupa imwe nzwisiso mairi Nhare dzeMakambani Ekushambadzira kune vatengesi nemabhizinesi. Heino sneak peek kune mashanu emakambani efoni ekushambadzira matipi.
Gadzirira Nharembozha - 30% yevatengesi venhare vanosiya chiitiko chevashandisi vavo chisina kugadzirirwa nharembozha yavo. Ita shuwa kuti maemail ako anotaridzika kushamisa pane ese mapuratifomu.
Tora muAccount iyo Nguva, Nzvimbo, uye Kuswedera kweVatengi vako - Nzwisisa kuti nguva, kupi, uye sei padyo nevatengi vako mbozhanhare pavanenge vachitsvaga. Iwe unogona kushamisika kuti vangani vatengi iwe vaunodhonza mukati zvakangoenderana nekutengesa kune vatengi zvichibva pane izvi zvakapusa zvinhu, zvichikubvumidza iwe kuti ushandise zvakanaka mushandirapamwe wako uye pakupedzisira wedzera kutengesa.
Dzivisa Kuratidzira uye Gadzirira Webrooming - Showrooming yakaderera pane yakanaka kana zvasvika pakutengesa kwekutengesa mukati mezororo. Webrooming (inozivikanwawo se reverse showrooming), kune rimwe divi ndizvo zvinoitika kana vatengi vachitsvaga zvigadzirwa pamhepo vasati vapinda muchitoro kuti vatenge izvo kutenga. Sekureva kweForrester Research, webrooming inokonzeresa $ 1.8 trillion mukutengesa na2017, nepo ecommerce yekutengesa inofanirwa kusvika $ 370 bhiriyoni mugore rimwe chete; webrooming ndiko kune vatengesi vemunguva inotevera vanokunda vachatonga. Izvo zvakakosha kuti ugadzire zvinokurudzira vatengi kuti vauye muchitoro chako uye votenge zvigadzirwa zvako pane kuvatsvaga online pamutengo wakaderera pawebhu.
Ita Kutsvaga Kwenhare Nyore - 57% yevatengi venhare vanosiya yako saiti kana vachifanira kumirira masekondi matatu kuti peji riite. Muchokwadi, yega yega 100 millisecond inowedzera mukutakura nguva inoderedza kutengesa ne1%. Ita shuwa kuti ako mapeji anotakura nekukurumidza uye akagadziridzwa kuti uwane mafoni.
Kutevedzera Beacon Technology - proximity kushambadzira inotamba yakakosha basa nyowani mukukwikwidza kushambadzira kwepamhepo uye pasiri pamhepo kuburikidza nehunyanzvi hwekurumbidza tekinoroji iyo inosarudzira mameseji ekutengesa kune vashandisi vega zvichienderana nenzvimbo yavo, chaiyo uye maitiro ekutenga, uye mamiriro ezvavanogona kutenga sarudzo. SmartFocus mutungamiri mune bhekoni tekinoroji uye anoshandisa iyo kupa zvakadzama mamiriro ezvinhu kune vatengi vayo.
Kuti uwane nzwisiso izere, ita chokwadi chekushanyira SmartFocus ' Nhare dzeMakambani Ekushambadzira kune vatengesi nemabhizinesi.
Tags: tekinoroji tekinorojikisimusi inofambamobile optimiziationmobile searchproximity kushambadzirareverse showroomingshowroomingsmartfocussmartfocus kushambadzira nharewebrooming
Nongedzo yekuyera B2B Kushambadzira Kubudirira
Multi-Chiteshi B2C Campaigns Ziva iyo 24% Yakakura Kudzoka paInvestment